घाटमा आयो मृतकमा कोरोना पुष्टि भएको खबर, मलामी भागाभाग ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /News/घाटमा आयो मृतकमा कोरोना पुष्टि भएको खबर, मलामी भागाभाग !
काठमाडौँ – रूपन्देहीको रोहिणी–३, धकधई निवासी नेपाल युवा किसान पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष सञ्जयकुमार मिश्रको शनिबार नि-धन भयो। मधुमेह र उच्च रक्तचापको समस्या भई केही दिनदेखि बिरामी परेका उनलाई शनिबार उपचारका लागि लैजाँदै गर्दा भारतको नौतनहामा नि-धन भएको थियो।
अस्पताल नपुर्याउँदै नि-धन भएपछि उनलाई नेपाल फिर्ता ल्याइयो। नेपाल ल्याइएपछि उनीमा कोरोना भाइरस संक्रमण छ छैन भन्ने पत्ता लगाउन बुटवलको निजी प्रयोगशालामा स्वाब पठाइयो। परिवारले स्वाब परीक्षणको रिपोर्ट कुरेनेन्, अन्तिम संस्कार सुरु गरे।
आइतबार बिहान ११ बजेतिर श-व घरबाट घाटतर्फ लगियो। त्यसक्रममा दिवंगत मिश्रका परिवार, आफन्त र उनका शुभेच्छुक सहित ४ सय जति मलामी गए। मलामी जानेमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसमेत थिए। त्यहाँ स्वास्थ्य संवेदनशीलतामाथि खेलवाड र निर्देशन अवज्ञा गरिएको थियो।
श-व जलाउने तयारी गर्दा-गर्दा मध्यान्न प्रयोगशालाले कोरोना पोजेटिभ रिपोर्ट दियो। उक्त खबर घाट सम्मै पुग्यो। मृतकमा कोरोनाको पुष्टि भएपछि रोहिणी घाटमा भागाभाग मच्चियो।
रोहिणी गाउँपालिका अध्यक्ष सनोजकुमार यादवले चितामा राखेर जलाउनै लागेका बेला कोरोना पोजेटिभ भन्ने खबर पाएको र आगो लगाउन मात्र बाँकि रहेको हुँदा त्यो पनि सकाइएको बताए।